Sida loo soo biiray BlackBerry in Android
Just lahaa heshiis ganacsi-in aad BlackBerry jir ah T-Mobile oo aad rabto inaad ka booday markabka si ay Android madal? Tan iyo markii aad wax fikrad ah oo ku saabsan waxa faraqa u dhexeeya labada nidaamyada hawlgalka, waa suurtowdaa weli laba maankiinna. Ka sokow, wareejinta content ka BlackBerry in Android u muuqataa tartan weyn oo aad u. Dhaqdhaqaaqay in walaaca fekerka? Isdeji. In this article, waxaan doonayaa inaan idiin sheego waxa Android ka duwan Blackberry, sida ay u gudbiyaan content BlackBerry in Android, iyo sida loo isticmaalo barnaamijyadooda Blackberry, sida Blackberry Rasuulka on Android. Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xogta sida xiriirada iyo dadka kale ee u dhexeeya telefoonada kasta oo hab fudud oo ammaan ah? Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu kuu sheego.
Qaybta 1. Transfer Xogta laga BlackBerry in Android 1 Click
Qaybta 2. Apps u Android iyo Blackberry
Qaybta 3. BlackBerry VS Android
Si aad BlackBerry ay u kala iibsiga Android, halkan waa qalab kala iibsiga phone awood badan waxaad sawiri kartaa taageero ka Wondershare MobileTrans . Waxay kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano xiriirada, abuse call oo ka gurmad BlackBerry file abuuray by V7.0 BlackBerry® Desktop Software iyo V7.1 SMS. Markaas, inaad telefoonka aad Android wareejin karaan faylasha gudahood 1 click.
Blackberry in Android Content Transfer Effortlessly
Wondershare MobileTrans Ka dhigayaa mid aad u fudud in aad wareejiso Guda wac, SMS iyo xiriirada ka BlackBerry in Android.
Xiriirada Transfer ka BlackBerry in Android aan ka kaaftoomi kasta.
Ceshano Guda call oo SMS ka gurmad u abuuray by BlackBerry® Desktop Software iyo wareejiyo Android.
Si fiican u shaqeeyaan Samsung, HTC, Sony, LG, Motorola, Huawei, ZTE, Acer iyo telefoonada Android dheeraad ah.
Taageerada sidayaal phone - T-mobile, qaran, AT & T iyo Verizon.
La jaan qaada BlackBerry OS 7 & 10, iyo bilowgii iyo BlackBerry® Desktop Software V7 iyo V10.
Sidee si ay u haajiraan ka BlackBerry in Android
Tallaabada 1. Hubi in aad haysatid ee kaabta BlackBerry
Haddii aad qabto wax gurmad BlackBerry abuuray by BlackBerry® Desktop Software, fadlan ka gudub talaabada. Haddii aan, waxay raacaan.
Download iyo rakibi Desktop BlackBerry® ee Software kombiyuutarka. Connect telefoonka aad BlackBerry in software ah. Markaas, guji kaabta si ay u sameeyaan gurmad ah non-Windows XP in kombiyuutarka.
Fiiro gaar ah: BlackBerry 10 casriga hadda taageeray.
Tallaabada 2. Isku Your Android Phone in Computer iyo Orod Wondershare MobileTrans ah
Download iyo rakibi Wondershare MobileTrans kombiyuutarka. Waxay u ordaan oo ku xidhi telefoonka aad Android la your computer. Markaas riix "Soo Celinta ka hayaan".
Tallaabada 3. Dooro in la soo celiyo ka kaabta BlackBerry
In uu furmo, waxaad ka arki kartaa fursadaha faylasha gurmad halkaas oo aad soo celin kara waxa ku qoran si aad telefoonka Android. Dooro "BlackBerry" iyo dhaqaaqo.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Messages Call Log iyo Text ka BlackBerry in Android
Tiirka bidix, dhammaan faylasha gurmad aad hore u samaysay ilaa show. Sax mid aad doonayso inaad dooro waxyaabaha aad rabto in aad soo celiyo. Markaas, guji "Start Copy" si ay u bilaabaan kala iibsiga. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, hubi in aan barkinta telefoonka aad Android.
Chine BlackBerry u Android
Chine Android for Blackberry
1. BlackBerry Rasuulkiisa u Android
Blackberry Rasuulkiisa, ayaa sidoo kale loo magacaabay BBM, waa app cabsi sameeyo qar. Hadda, waxa uu leeyahay version ah Android, si aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan Rasuulka BlackBerry telefoonka Android . App Tani si dhow idiin soo qoysaska iyo saaxiibada aad dhex fariimaha deg dega ah, qoraalada cod, wicitaanada cod, sawir qaybsiga, waraaqaha la wadaago iyo in ka badan.
2. Download Blackberry Rasuulkiisa u Android
Here're suuqyo badan app Android caan ah oo aad kala soo bixi barnaamijyadooda aad doonayay. Halkan, waxaan qaadan Google Play sida tusaale. Fur biraawsarkaaga iyo caga dukaanka Google Play. Saxiix ah ee xisaab, in aad u isticmaasho download barnaamijyadooda. Ku qor BBM sanduuqa raadinta. In natiijooyinka raadinta, guji BBM in ay galaan bogga BBM ah. Riix rakib si dejisan iyo rakibi in telefoonka aad Android.
3. barnaamijyadooda kale BBM on Android
Inkastoo BBM waa hinaasada reer badan barnaamijyadooda fariimaha deg dega ah, waxaa weli qaar ka mid kale oo aad u fiican. Ka mid ah, waxaa jira WhatsApp Rasuulkiisa , app ah Rasuul diyaar u smartphone Android iyo kuwa kale. Sidaa daraadeed, waxaad la hadli kartaa saaxiibadaa iyo qoysaskooda si sahlan. Marka aad hesho farriimo, WhatsApp Rasuulka iyaga bedelan kartaa oo ha kuu soo diri fariimaha, qoraalada audio, farriimo video iyo sawiro. Weey wanaagsan tahay? Waa maxay sababta aan kala soo bixi si uu u siiyo kubad?
Waxa intaa dheer in WhatsApp Rasuulka, waxa kale oo aad isku dayi kartaa barnaamijyadooda kale duwan oo loogu talagalay BBM, sida LINE , WeChat , Facebook Rasuulkiisa , Skype , Viber , iwm
Hel app fariimo dheeraad ah halkan >>
1. barnaamijyadooda Android for Blackberry Z10 / Q10
Hel BlackBerry Z10 iyo la yaabanahay in barnaamijyadooda Android waxaa loo isticmaali karaa on your BlackBerry Z10? Haa, dabcan, waxaad ku rakibi karo barnaamijyadooda telefoonka aad BlackBerry marka la socda BlackBerry 10.2.1. Halkan, waxaan idin tusayaa sida si loo soo dajiyo barnaamijyadooda Android for Blackberry Z10 iyo Blackberry Q10.
1.1 meesha laga helo Android APPS?
Hab sahlan looga heli karo iyo rakibi barnaamijyadooda Android on Blackberry Z10 / Q10 waa in la isticmaalo app dukaan cid saddexaad, sida Amazon Appstore , Market 1mobile , SNAP APK Downloader , iwm
1.2 SIDA si loo soo dajiyo APPS?
Halkan, waxaan doonayaa inaan qaato Amazon Appstore sida tusaale. Gala bogga Amazon Appstore iyo download it on your BlackBerry Z10 / Q10, sida aad u sameeya on Android phone. On aad BlackBerry Q10 / Z10, awood si loo soo dajiyo Amazon Appstore iyo raac alaabta si ay u rakibi. Markaas, gasho xisaabtaada Amazon iyo baadhno, oo kala soo bixi barnaamijyadooda Android aad doonayay on BlackBerry Z10 / Q10. Baro More >>
2. barnaamijyadooda Android for Blackberry PlayBook
Hayso BlackBerry PlayBook iyo doonayaa inaan ciyaaro barnaamijyadooda Android ku yaal? Blackberry PlayBook OS 2.0 ayaa qoreysa Android Player qayb siinaya inaad hesho noocyo kala duwan oo codsiyada gacanta loogu jecel yahay. Riix xiriirka download in ay bartaan sida loo soo dajiyo barnaamijyadooda Android on BlackBerry PlayBook iyo 10ka barnaamijyadooda.
Top 10 app ugu wanaagsan lacag la'aan ah Android for Blackberry PlayBook >>
Hardware Dhamaan telefoonada Blackberry ayaa la sameeyo qar iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah u muuqataa mid ah. Ilaa xad, tani waxay noqon kartaa khaladkaasi, sida ay tahay la'aanta kala duwanaanshaha. Si kastaba ha ahaatee, telefoonada badan BlackBerry ciyaari keyboard QWERTY ah, kaas oo soo jiidanaya dadka isticmaala dad badan oo jeclaan khaanada ku yaal. Marka loo eego Blackberry, Android users leedahay noocyo kala duwan oo doorashooyin in ay doortaan waxa ay dhab ahaan doonayaan. Taasi waa sababta oo ah casriga ah Android leeyihiin saarayaasha badan, sida Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google, LG, iwm
OS Inkasta oo Blackberry Z10 waa casriga ah touchscreen buuxa, laakiin qaar badan oo ka mid ah telefoonada ee ku tiirsan keyboard la taaban karo. Haddii aad diiradda saaraan isgaarsiinta, BlackBerry laga yaabaa in mid ka mid ah kugu habboon. Nooca Android furan ka dhigaysa ay u taagan ka mid ah qalabka dukaamada waaweyn ee ka soo baxay. Waxaad si fudud u helaan maaraynta music, video, sawiro, xiriirada iyo ka badan oo la hal cable USB ah.
Hagaaji Waa sahlan ee telefoonada BlackBerry in la casriyeeyay. Blackberry aad ku hayaa ilaa taariikhda marka version cusub waxaa laga heli karaa. Mar kasta oo version cusub ee Android ka soo baxaba, qaar ka mid ah casriga cusub ee ka soo baxay. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana in aad u cusboonaynta aad Android smartphone.You laga yaabaa inaad sugto waqti dheer ilaa saarayaasha raalli Android cusub.
Networking Blackberry Rasuulka app app waa u fiican oo kuu oggolaanaysa in aad xiriir saaxiibada iyo qoysaska via fariimaha deg dega ah. Maamulka email Blackberry ayaa sidoo kale ka dhigaysa mid u taagan. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan, barnaamijyadooda badan oo la mid ah shaqooyinka soo baxa madal ay Android, sida WhatsApp, WeChat. Android fiican ee shabakadaha. Waxaa tahay barnaamijyadooda badan warbaahinta bulshada si ay kaaga caawiyaan in aad si dhow u la xiriiri dadka kale, sida Facebook. Twitter, WhatsApp iyo in ka badan.
Apps Blackberry bixisaa aad app xarunta online si ay u iibsadaan ama barnaamijyadooda download. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu ku jira barnaamijyadooda ugu badan ee Android falaa. Blackberry bixisaa aad app xarunta online si ay u iibsadaan ama barnaamijyadooda download. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu ku jira barnaamijyadooda ugu badan ee Android falaa. Waxaa jira boqolaal kun oo Chine ee Suuqa Android ay tahay, sida Google Play, AppBrain, iwm oo aad kala soo bixi kartaa barnaamijyadooda aad ugu jeceshahay.
Battery Life Phone BlackBerry wuxuu leeyahay nolosha batari weyn, kaas oo socon kartaa waqti ka sii dheer tahay telefoonada kale. Telefoonada Android u muuqdaan in ay leeyihiin nolosha batari saboolka ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad ka qaadaan telefoonka maalin caadi ah loo isticmaalo gudahood.
Sidee si ay u gudbiyaan BlackBerry in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka BlackBerry si iPhone?
Sida loo dhaqaaq Content ka iPad in Samsung?
Sida loo Copy Xogta laga Android inay Samsung?
Sida loo bood Ship ka Android inay macruufka?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka HTC in HTC?
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay Android
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo SMS ka BlackBerry in Android